Qaybaha dayactirka ee Crane
Qaybaha Haydarooliga Crane
Crane Haydarooliga Madax
Crane Counterbalance Madax
Qufulka Crane Haydarooliga
Valne Operating Madax
Mashiinka Xakamaynta Crane
Qalabka kale ee korantada
Motor Crane Haydarooliga
Bamka Saliida Hawada ee Crane
Mashiinka Saliida Crane Gear
Mashiinka Isteerinka Crane
Qaybo ka Crane Chassis
Qaybaha injiinka wiishka
Dhululubada ah ee dhululubo ah
Silsiladda Crane Horizon
Dhululubadda Crane Luffing
Dhululubo Crane No.5 Outrigger
Dhululubada Aidoiljar ee Crane
Iftiinka Crane Alarm
Iftiinka 'Crane Back Fog Light'
Iftiinka iftiinka Wiishka gadaashiisa
Iftiinka Digniinta Crane
Wiishka hore ee isku dhafan
Siraad Foosha Sigaarka
Iftiinka Magaca-saxanka Crane
Iftiinka Gawaarida Gawaarida
Dhammaadka-Tusmada Mark Lamp
Filter saliida Haydarooliga
Waxyaabaha kale ee shaandhada
Bamka masterka xajin
Lidka bamka hoosta
Nidaamka Crane Torque
Length iyo unit shidma xagal
dareeraha cadaadiska saliida
Nidaamka isteerinka Crane
Wadida gacan gantaal
Qaybaha dhismaha Crane
Crane wiish iyo slider
Nidaamka korantada ee Crane
Crane Cab iyo qalab
Qaybta muraayadda gadaal
Gearbox iyo qalab
Fiilooyinka birta ah & Dhawaaqa
Wiishka 'XCMG QY20B' si dhakhso ah ayuu u gaabiyaa
Cillad khaldan: Wiishka 'Xugong QY20B crane' si dhakhso ah ayuu u kala rogmaa slowly Tilmaanta cilladda: tareenka raac oo si dhakhso leh u rogrogmo adigoo gaabis ah. U fiirso in cadaadiska labada dhinac ay kala duwan yihiin inta lagu jiro hawlgalka goobta. Sababta gorfaynta fashilka: 1: Meel dhigida jiifka ...
XCT25L5 saddex-afar-iyo shan gacan lama dheereyn karo
Cilad cillad: XCT25L5 345 cudud wadajirka ah ma fidin karto description Tilmaanta cilladda: XCT25L5 wax ficil ah ma lahan marka la kala bixinayo labada gacmood ka dibna la dheereynayo seddex ama afar ama shan gacmood, labada gacmoodna si caadi ah ayey u kala baxayaan. Falanqaynta sababaha fashilka: cilad koronto. Cilad-saarista ...
XCMG QY25K5-QY50K (oo ay ku jiraan QY50B) wiishka gacantiisa labaad iyo seddex afar shan shan gacan ah ma beddeleyso jihada.
Cilad cillad: XCMG QY25K5-QY50K (oo ay ku jiraan QY50B) wiishka gacantiisa labaad iyo seddex afar afar shan gacan ah ma beddeleyso jihada. Tilmaanta cilladda: gaariga laba gacmood ayaa si caadi ah u yaraada, seddex afar shan shan ah ma beddeli karaan telescopic. Falanqaynta sababta ciladda: 1 ...